သူ့မယားကျနေတာပဲ” – Grab Love Story
ကြယ်ရောင်တချို့က စိန်ပွင့်လေးများကြဲပက်ထားသကဲ့သို့ တလက်လက်ဖြင့် လင်းတခါမှိန်တလှဲ့ ဖြင့်
သူတို့တတ်နိုင်သော အလင်းကလေးဖြင့် ကမ္ဘာမြေထက်သို့ လင်းချပေးနေသည်။
ပူလောင်ပြင်းပြသော နွေလယ်ညရဲ့ မှောင်မိုက်မှု့အောက်မှာပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး တိတ်ဆိတ်လို့နေသည်။ သုတ်ကနဲတိုက်ခတ်လိုက်သော လေပြည်ညင်းတစ်ချက်ကြောင့် အမှောင်အောက်မှာအိပ်ငိုက်နေသော သစ်ပင်တို့လူးလွန့်လှုပ်ရှားသွားကြသည်။ “ရှဲ….” ကနဲတိုက်ခတ်လိုက်သော လေပြည်ညင်းရဲ့တိုးဝှေ့ကျီစယ်မှု့ကြောင့်လားမသိပေမဲ့တစ်ခုသော တစ်ထပ်တိုက်ကလေးရဲ့အခန်းငယ်လေးထဲမှ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ရှိ အမျိုးသမီးတဦး အိပ်ယာထက်မှ ဖျပ်ကနဲ လန့်နိုးလာသည်။ သူမနာမည်က ခင်မဟုခေါ်သည်။တင်းတင်းပြည့်ပြည့်ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားခန္ဓာကိုယ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးခေတ်စကားဖြင့်ပြောရလျင် တော်တော်လေး
နှောင်လိုက်သည်။ အခန်းမီးမဖွင့်တော့ပဲကုတင်ပေါ်မှဆင်းကာအိမ်သာသွားရန်အခန်းပြင်သို့ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ တိတ်ဆိတ်နေသော ညလယ်မှာ သေးပေါက်ရန်အတွက်ထွက်လာသောခင်မ အခန်းတံခါးကို အသံမထွက်စေရန် ဖြည်းညင်းစွာ ပိတ်လိုက်သည်။ ခင်မတို့အိမ်မှရေလောင်းအိမ်သာကတိုက်နှင့်တဆက်တည်းမဟုတ်ပဲတိုက်နောက်ဘက်ပေနှစ်ဆယ်လောက်အကွာမှာ ဆောက်ထားသည်။ ဧည့်ခန်းကို ဖြတ်ကာ အနောက်ဘက်သို့ ခြေလှမ်းခပ်သုတ်သုတ်လှမ်းဖို့ပြင်လိုက်သည့်ခင်မမျက်ဝန်းတွေကအိမ်၏နောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်သော တူတော်မောင် စိုးနိုင်ထွန်းအခန်းတံခါးရှေ့မှအဖြတ်တွင် မပွင့်တပွင့်ဖွင့်ထားသောတံခါးကြားမှအလင်းရောင်တချို့ အပြင်သို့ လျှံထွက်ကျနေတာကိုမြင်လိုက်ရပေမဲ့သေးပေါက်ချင်စိတ်တို့ကထိန်းမရသဖြင့် အိမ်သာသို့ခပ်မြန်မြန်လေးပြေးလိုက်သည်။
သေးပေါက်ပြီးရေဆေးကာ အိမ်သာထဲမှ ထွက်လာသည့် ခင်မ မိမိအခန်းရှိရာသို့ ပြန်လာချိန်စိုးနိုင်ထွန်းအခန်းတံခါးခပ်ဟဟလေးပွင့်နေသည့်ကြားမှ အခန်းထဲသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ အိပ်ယာပေါ် အိပ်နေသော စိုးနိုင်ထွန်းကို အလင်းရောင်တစွန်းတစကြားမှ မြင်တွေ့လိုက်ရချိန်တွင် “ဩော်….ငါ့တူလေး စာကျက်ရင်း အိပ်ပျော်သွားရှာတာနေမှာ…ခြင်ထောင်လည်း မထောင် မီးလည်းမပိတ်နဲ့ အိပ်နေလိုက်တာ ခြင်ထောင်လေးချပေးသွားဦးမှပါလေ” ဆိုသည့်အတွေးဖြင့် တူတော်မောင် စိုးနိုင်ထွန်း အခန်းထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်။ ကုတင်ဘေးကပ်ကာ ခြင်ထောင်ချပေးဖို့ ပြင်နေသည့် ခင်မမျက်လုံးတွေက အိပ်ယာထက်ပိုးလိုးပက်လက်အိပ်နေသော စိုးနိုင်ထွန်းကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိချိန်… “အို….” ခင်မ မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားသည်။ ကြည့်ပါဦး… အိပ်နေလိုက်တာ….အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းနေဖြင့် အောက်ပိုင်းက ပုဆိုးကလည်း ခါးပေါ် အကွင်းလိုက် ရစ်ပတ်ထားလျက်။
ဒူးတစ်ဘက်ကွေးထားပြီးကျန်ခြေတဘက်က ဆန့်တန်းအိပ်နေသည့် စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့ အောက်ပိုင်းကို မျက်လုံးများမခွာနိုင်အောင် ကြည့်နေရင်း ခင်မ ရင်တွေဖိုလာသည်။ မိမိယောင်္ကျား ကိုမြင့်မောင်ရဲ့လီးကြီးနှင့်ဝေးကွာနေရသည်မှာ ယခုအချိန်ဆိုလျင် ရှစ်လကျော်သွားပြီ….တိတိကျကျဆိုရရင် ခင်မယောင်္ကျားလီးနဲ့အလိုးမခံရတာ ရှစ်လကျော်နေပြီ….. ကားသမားဖြစ်သော ကိုမြင့်မောင်နှင့်အိမ်ထောင်ကျပြီး မိဘနေအိမ်မှခွဲခွာ၍သျှောင်နောက်ဆံထုံးပါကိုမြင့်မောင်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ရပြီး တစ်နှစ်ပြည့်အောင်ပင် မပေါင်းလိုက်ရပဲလင်ဖြစ်သူကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက်ကုန်ကားမောင်းရင်းကားမှောက်ပြီးကွယ်လွန်သွားတော့ ရှိတာလေးတွေရောင်းချပြီး အကိုအရင်းဖြစ်သူစိုးနိုင်ထွန်းအဖေအိမ်သို့ စိတ်ပြေလက်ပျောက် လာနေရာမှ မပြန်ဖြစ်တော့ပဲရှိတာလေးထုခွဲရောင်းချပြီး အကိုဖြစ်သူရဲ့ပွဲရုံလုပ်ငန်းထဲ ရှယ်ယာထည့်ကာဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစားသဘောဖြင့် နေနေခြင်းဖြစ်သည်။
ရေငတ်နေသူတစ်ယောက်လို လည်ချောင်းထဲ တံတွေးများ ဂလုကနဲ မျိုချလိုက်ပြီး စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့ လီးကို တပ်မက်စွာဖြင့် စူးစိုက်ကြည့်ရင်း ခင်မ ဆုံးဖြတ်ရခက်စွာဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ အသက်(၁၅)နှစ်ကျော်(10)တန်းကျောင်းသား စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အိပ်နေပုံကြောင့် ခင်မ ကုတင်အနီးသို့ တဖြည်းဖြည်း တိုးကပ်သွားမိသည်။ ဖြူဖွေးနေသောဗိုက်သားကျစ်ကျစ်များအောက်မှာ ရှည်လျားစွာပေါက်နေကြသောလမွေးမဲနက်ရှည်ရှည်များကြားမှ မိုးပေါ်ထောင်တက်တော့မည့်ဟန်ဖြင့်စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့ အကြောတပြိုင်းပြိုင်းထနေသော လီးညိုရှည်ကြီးကိုက ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲလှုပ်သွားချိန်တွင်မတော့ခင်မတစ်ယောက်စူးစူးရဲရဲ မမှိတ်မသုန်ကြည့်နေရာမှ တူဖြစ်သူအိပ်ယာဘေး ဖျပ်ကနဲ တိုးကပ်သွားပြီး တုန်ရင်နေသော လက်ချောင်းကလေးများဖြင့် စိုးနိုင်ထွန်း လီးဒစ်ထိပ်ဖူးအောက်နေရာသို့ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
ပူနွေးတင်းအိသော လီးချောင်းကြီးကို ကိုင်လိုက်မိချိန် ခင်မဆောက်ပတ်ကြီးတခုလုံးယားယံအုံကြွလာကာ ဘာကိုမှ မစင်းစားမိတော့ပဲ တူဖြစ်သူ စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့လီးထိပ်ဖူးကြီးကို နှုတ်ခမ်းသားတို့ဖွင့်ဟပြီး ကုတင်ဘေးမတ်တပ်ရပ်နေရာမှ ငုံ့စုပ်ပြစ်လိုက်သည်။ “အင်းးးးးးးး” လီးထိပ်ဖူးကြီးနှင့် နှုတ်ခမ်းသားတို့ ထိမိခိုက် စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့ ညည်းညူသံကြောင့် ခင်မအလန့်တကြားနောက်ဆုတ်လိုက်မိသည်။ ကွေးထားသော ခြေထောက်ကို ဆန့်တန်းတွန်းထုတ်လျက် ကုတင်ထက်ပက်လက်အိပ်နေသည့် စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့ ပေါင်ကြားမှ လီးချောင်းကြီးက အသက်ရှုလိုက်တိုင်း တဆတ်ဆတ်ဖြင့်လှုပ်ရမ်းလို့နေသည်။ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော တူဖြစ်သူရဲ့ လီးညိုရှည်ရှည်ကြီးကို ကြည့်ရင်း ခင်မ ရင်တွေမောလာသည်။ ခင်မကိုယ်တိုင် ဘာလုပ်လို့ လုပ်မိမှန်းမသိလိုက်ခင်မှာပဲ ခင်မကိုယ်လုံးလေးက အိပ်ယာထက်ပက်လက်ဖြစ်နေသော စိုးနိုင်ထွန်းပေါ်သို့ကားယားတက်ခွလိုက်သည်။
ထဘီအောက်နားစကို အထက်သို့ လုံးစုကိုင်လျက် စိုးနိုင်ထွန်း လီးထိပ်ဖူးပေါ်သို့ ဆောက်ပတ်တေ့လျက် ဖြေးညင်းစွာဖြင့် ပွတ်ပေးနေမိသည်။ ခင်မ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စိတ်တို့ရှိပေမဲ့ တူဖြစ်သူရဲ့ လီးကိုမြင်လိုက်ကထဲက မျိုသိပ်ထားခဲ့ရသော တဏှာဇောတို့ပွင့်ထွက်သွားကာ သင့်တော်၏မသင့်တော်၏ မတွေးတောတော့ပဲ စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ လှုပ်ရှားနေမိသည်။ နူးညံ့သည့် လီးထိပ်ဖူးတခုလုံးကို ခင်မရဲ့ဆောက်ပတ်သားအိအိဖောင်းဖောင်းတို့ဖြင့် ထိပွတ်ပေးနေရာမှ လီးထိပ်ဖူးလေးကို ဆောက်ပတ်အကွဲကြောင်းနှင့်တည့်သွားချိန်တွင် ခင်မ လီးတန်ပေါ်သို့ အားစိုက်ဖိချလိုက်သည်။ “ဗြွတ်….” “အု…” “အားးးးးး” အားကနဲ တိုးတိတ်စွာရေရွတ်လိုက်သည့် စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့နဖူးကြောကြီးမျာ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး လီးထိပ်ဖူးကြီးကို ဆတ်ကနဲအထက်သို့ကော့ဆောင့်လိုက်သည့်တခဏလေးမှာပင်ခင်မဆောက်ဖုတ်ထဲ လီးထိပ်ဖူးကြီးတခုလုံး အိကနဲဝင်သွားသည်။
လီးထိပ်ဖူးဆီမှတင်းကနဲဖြစ်သွားခြင်းနှင့်အတူစိုးနိုင်ထွန်းတစ်ယောက်ကယောင်ကတန်းဖြင့် လန့်နိုးလာသည်။ “ဟာ…အန်…အန်တီ…အန်တီမ” စိုးနိုင်ထွန်းမျက်လုံးများ ပွင့်သွားချိန် ခင်မ လန့်ဖျပ်ပြီး ရုတ်ချည်းထရပ်လိုက်သည်။ “ဖွတ်….” ဆောက်ခေါင်းဝမှ လီးထိပ်ကျွတ်ထွက်သံခပ်တိုးတိုးလေးထွက်ပေါ်သွားသည်။ ခင်မ ကုတင်ပေါ်မှ ကပျာကယာဆင်းဖို့ပြင်လိုက်ချိန် “အန်…အန်တီမ…” တုန်ရင်မောဟိုက်နေသောလေသံဖြင့် ထဘီအောက်နားစကိုဆွဲထားပြီး အိပ်ယာပေါ်အတင်းတွန်းလှဲဖို့ကြိုးစားနေသော စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့လက်တို့ကို ဆွဲဖယ်ရုန်းကန်ရင်း “အန်တီမ…မှားသွားတယ်…သားရယ်…ဖယ်ပါ…လွှတ်ပါကွယ်…” “ဟင့်အင်း…မလွှတ်ဘူး…အန်တီမရယ်…” “လွှတ်ပါကွယ်…သားရယ်…လိမ္မာပါတယ်…ဖယ်ပါ…အန်တီမသွားတော့မယ်…ဖယ်…မင်းအမေတို့နိုးသွားလိမ့်မယ်” အတင်းဆွဲဖက်နေသော တူဖြစ်သူရဲ့လက်တို့ကို ဆွဲဖယ်ပြစ်ရင်း ခင်မ ကုတင်အောက်သို့ ရောက်သွားသည်။
“အန်တီမ…သား…ခုနကလို ကောင်းချင်တယ်…လာပါ…ပြန်လုပ်ပေးပါနော်…မေမေတို့အခန်းနဲ့အဝေးကြီးပါ…သားကို ခုနကလို လုပ်ပေးပါနော်…” ခါးကို တင်းကျပ်စွာဖက်ထားလျက် ခါးမှထမိန်အနားစကို ဆွဲချွတ်နေသော စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့ပေါင်ကြားကို ခင်မမျက်လုံးအကြည့်များက ရောက်သွားသည်။ တူအရင်းဖြစ်သူရဲ့ပေါင်ကြားမှ လီးတန်ကြီးက လေထဲ တရမ်းရမ်းတခါခါဖြင့် လှုပ်ခတ်နေတာမြင်လိုက်တော့ ခင်မတစ်ယောက် ရုန်းကန်ဖယ်ရှားနေမှု့တို့ ရပ်တန့်သွားသည်။ “အန်တီမ…သားကို…” “ရှုးးးးးးး” ခင်မအသံကြောင့် စိုးနိုင်ထွန်းပြောလက်စ စကားသံတို့ရပ်တန့်သွားသည်။ “သား…ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဘူးနော်…” ပျော်ရွှင်သွားဟန်ဖြင့်လက်ကနဲ ပြုံးလိုက်သော စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့အပြုံးတွေကို ခင်မ မျက်စောင်းလှလှတစ်ချက်ဖြင့် တုန့်ပြန်လိုက်ပြီး လေထဲမှာ တန်းမတ်နေသော လီးတန်ကြီးကို လက်ချောင်းများဖြင့်ဆွဲယူစုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
ထို့နောက် ခင်မ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ စိုးနိုင်ထွန်းလီးတန်ဆီ မျက်နှာအပ် နမ်းရှိုက်လိုက်သည်။ လီးတန်အရင်းမှကိုင်ကာ ထိပ်ဖူးလေးဆီသို့ နှုတ်ခမ်းသားလေး မပွင့်တပွင့်ဟကာ ငုံစုပ်လိုက်သည့် ခင်မအပြုအမူကြောင့် စိုးနိုင်ထွန်းတကိုယ်လုံးရှိအကြောများတဖျင်းဖျင်းဖြစ်ကုန်လောက်အောင် အကောင်းကြီးကောင်းသွားပြီး ဗိုက်သားလေးများခွက်သွားအောင် ကိုယ်ကိုငုံ့ကိုင်းကာ သူ့လီးကို ရှေ့သို့ ကော့ထိုးပေးလိုက်သည်။ “အွန့်….ပလွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်…စွိ…စွိ…အဟွတ်…အဟွတ်” ရုတ်တရက်ဆောင့်ဝင်လာသော လီးထိပ်ဖူးကြီးက အာခေါင်ထဲ ထိုးစိုက်လာသဖြင့် ခင်မ ရုတ်တရက် အသက်ရှုကျပ်ကာ ချောင်းဆိုးချင်သလိုလို ဖြစ်သွားပြီး မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်တို့ ပြည့်လျှံလာသည်။ အန်တီမရဲ့လီးစုပ်ပေးမှု့ကြောင့် စိုးနိုင်ထွန်းဖင်သားတွေ တင်းကနဲရှုံ့လိုက်မိကာ လီးကို ရှေ့သို့ တအားကော့ထိုးပေးမိရင်း အန်တီခင်မခေါင်းကို လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် စုံကိုင်ထားလျက် ဆောင့်လိုးပြစ်လိုက်သည်။
ဆတ်ကနဲ အတင်းတိုးဝင်လာသော လီးကြီးကြောင့် ခင်မခေါင်းကို နောက်သို့ဆုတ်ဖယ်တိမ်းရှောင်ရန်ကြိုးစားရင်းမှ ဆံပင်များကို ဆွဲဆောင့်ပြီး သူ့လီးကို ရှေ့သို့ကော့ထိုးလိုက်ခြင်းကြောင့် မျက်လုံးများပြူးသွားကာ အသက်ရှုရခက်သလို ဖြစ်သွားမှု့ကြောင့် ထိုင်နေရာမှ စိုးနိုင်ထွန်း ဆီးခုံကို လက်ဖြင့်အတင်းတွန်းဖယ်မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ “ဟာ….အန်တီမကလည်း စုပ်လေဗျာ…ဒီမှာ လီးက တအားတင်းနေပြီ…” မချင့်မရဲလေသံခပ်မာမာ ထွက်ပေါ်လာတော့ ခင်မ လန့်သွားသည်။ “ရှုး…တိုးတိုး…တိုးတိုးပြောလေ” “ဟင့်အင်း….ခုနကလို လုပ်ပေးနော် အန်တီမ….” စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းထက် လက်ချောင်းတို့ဖြင့်လှမ်းပိတ်ကာ ရင်ဘတ်ကို တွန်းလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ လဲကျသွားအောင် တွန်းလှဲချလိုက်သည်။ “ဘုန်းးးးး” “အင့်….” ကုတင်ထက် ပက်လက်လဲကျသွားပေမဲ့ စိုးနိုင်ထွန်းလီးကြီးက ပေါင်ခွဆုံကြားမှာ တလှုပ်လှုပ်ဖြင့် လှုပ်ရမ်းနေပုံက။
ခင်မ ဆောက်ပတ်ကြီးတခုလုံး ပိုးမျိုးတစ်သောင်းဝင်အောင်းပြေးလွှားနေသလို တရွရွဖြင့် ယားတက်လာသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ ခင်မ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ ဒီည ကိုယ့်အကို အရင်းကမွေးထားသော တူအရင်းခေါက်ခေါက်လီးဖြင့် မိမိအလိုးခံလိုက်တော့မည်။ နုနယ်ပျိုမျစ်သော တူဖြစ်သူရဲ့လီးပါကင်လေးအား မိမိဆောက်ဖုတ်တွင်း သက်ဆင်းခိုအောင်းခိုင်းပြစ်မည်။ လူပျိုနုနုထွတ်ထွတ်လီးလေးအား မြိန်ရည်ယှက်ရည် အရသာခံဖို့ ဘာမှမတွေးတော့ပဲ ခံပြစ်လိုက်တော့မည်။ အိပ်ယာထက်မှ စိုးနိုင်ထွန်း သူ့အဒေါ်ရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်နေရင်း အိပ်ယာပေါ်မှထဖို့ ကြိုးစားလိုက်ချိန် “ငြိမ်ငြိမ်နေ…” ရင်ဘတ်ကို လက်တဘက်ဖြင့်ဖိလျက် ကုတင်ထက် တက်လာသည့် အန်တီမရဲ့ပုံစံကြောင့် စိုးနိုင်ထွန်းမျက်နှာမှာ အပျော်တွေဖုံးလွှမ်းသွားကာ ပါးနှစ်ဘက် နားရွက်ချိတ်မတတ်ပြုံးလိုက်ရင်း အိပ်ယာပေါ် အလိုက်သင့်လှဲချလိုက်သည်။
ခင်မ စိုးနိုင်ထွန်းခါးပေါ် ကားယားခွလျက် လီးတန်ကို ကိုင် ဆောက်ဖုတ်ဝသို့ တေ့ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ နူးညံ့သည့် လီးထိပ်ဒစ်ကြီးနှင့် ဆောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျောက် ပွတ်ဆွဲအရသာခံနေရာမှ ခင်မ ဆောက်ဖုတ်အပေါက်နှင့်လီးထိပ်ကို တေ့ထိုင်ချလိုက်သည်။ “ဗျစ်….” “ဇိ…” “အားးးးးဟားးးးးအန်တီမ…..အန်တီမရာ….” လီးထိပ်ဖူးလေး ဆောက်ပတ်ဝထဲ နစ်မြုပ်သွားချိန် လူပျိုပေါက် စိုးနိုင်ထွန်းတစိယောက် ဆောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်သည့် အရသာကို ပထမဆုံး ခံစားလိုက်ရချိန် နူးညံ့အိစက်သည့် ဆောက်ပတ်အတွင်းသားတို့က လီးထိပ်ဖူးကို တရစ်ရစ်ဖြင့် ဆွဲညှစ်နေသလို ခံစားလိုက်ရတော့ တအားအားတဟားဟားဖြင့်အော်ဟစ်ကာ ဖင်ကိုကြွလီးကိုကော့ကာ အထက်သို့ ပင့်လိုးလိုက်မိသည်။ “ဗွတ်…ဘလွတ်…ဘွတ်” “အားးးးလားးးးလားးးးးတအားကော့ဆောင့်လိုးရသလား…..” ခင်မဆောက်ဖုတ်ထဲစွိကနဲတိုးဝင်လာသော လီးတစ်ချောင်းလုံး အရင်းထိဝင်သွားချိန်။
အပေါ်မှ ဆောက်ပတ်အုံတခုလုံးပြားကပ်နေအောင်ဖိထားလျက် စိုးနိုင်ထွန်းကို တီးတိုးလေး ရန်တွေ့လိုက်သည်။ ဆောက်ဖုတ်ထဲ လီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်နေကာ အပေါ်စီးမှ တက်ခွလိုးပေးနေသည့် အန်တီမရဲ့ မူယာမာယာသံလေးကြောင့် စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့တဏှာရှိန်တို့ တဖွားဖွားတိုးမြင့်လာကာ အရမ်းလိုးချင်နေသည့်စိတ်တို့ကို ထိန်းချုပ်မထားတော့ပဲသူ့လီးကို အောက်မှနေအထက်သို့ တရစပ် ကော့ကာကော့ကာ လှုပ်ရှားပေးလိုက်သည်။ “ဇွိ…ဖပ်…ဖပ်…ဖပ်” “အို….အန်တီမ ဖင်ကြွပေးမယ်…အောက်ကနေ ငြိမ်ငြိမ်နေ….မြန်မြန်လေးတော့ လိုးနော်….” နားနားကပ်ပြောလိုက်သည့်အန်တီမစကားကို နားထောင်မည်ဆိုသည့်အကြောင်း ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တော့ ခင်မဖင်သားတို့လေထဲကြွတက်သွားသည်။ လီးတချောင်းလုံး ဆောက်ပတ်အပြင်သို့ ရောက်သွားပြီး လီးထိပ်ဖူးလေးနှင့်ဆောက်ပတ်အကွဲကြောင်း တည့်တည့်ချိန်ကာ ခင်မ ဖိထိုင်ချလိုက်သည်။
အင့်….အား….အန်တီမ….ကောင်းလိုက်တာ…အ…အ….လီးကြီးကို စိမ့်သွားတာပဲ ခင်မ ဘာစကားမှ ပြန်မပြောပဲ လီးတချောင်းလုံး ဆောက်ပတ်ထဲ ပြွတ်ကနဲတိုးဝင်သွားချိန် ဆောက်ပတ်အတွင်းသားများကို ညှစ်ပေးလိုက်သည်။ “စွိ စွပ် ဖွတ် ဘုဘွတ် ဘွပ် ဘုတ်ဖတ် ဗလွတ် ဘွတ် စွိဇွပ် ဘွတ် ဖွတ် ဗွပ်” မျက်တောင်ရှည်ကြီးများဖျပ်ကနဲ ပိတ်ကျသွားအောင်ကောင်းသွားသည့် စိုးနိုင်ထွန်းတစ်ယောက် ခင်မဆောက်ပတ်အတွင်းသားတွေရဲ တစိစိဖြင့် ညှစ်ပေးလိုက်မှု့ကြောင့် လီးတစ်ချောင်းလုံး ကျင်တက်သွားကာ သုတ်ရည်များကို ခင်မဆောက်ပတ်ထဲ ပန်းထည့်ပေးလိုက်တော့သည်။ “အားးးးးးမရ….မရ….တော့ဘူးးးးးးအန်တီမ…ထွက်ပြီ ထွက်ကုန်ပြီ….” “အ…အားးးးးရှီးးးးးးရှီးးးးးးအင့်…” “ဗျစ်….ဗျစ်….ဗျစ်….” ပြောလည်းပြော အိပ်ယာထက်မှ ခါးတို့ကြွတက်ကော့ဆောင့်လိုက်သညိ့ စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး တဆတ်ဆတ်တုန်သွားကာ မျက်နှာပြင်ထက်မှ မချိမဆန့်ခံစားနေရသည့်ပုံစံဖြင့် နှုတ်ခမ်းထက်မှလေချွန်သလို တအီးအီး တရှီးရှီးဖြင့် ညည်းသံထွက်ကာ။
ခင်မဆောက်ပတ်ထဲသို့ သုတ်ရည်များ တဗျစ်ဗျစ်ဖြင့်ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။ “ကောင်းလိုက်တာ အန်တီမရာ….” စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့စကားသံအဆုံးမှာ ခင်မတစ်ယောက် စိုးနိုင်ထွန်းလီးပေါ်ထိုင်နေရာမှ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်သည်။ “ပလွတ်….ဘွတ်..ဘု…ဘူ…” ဆောက်ပတ်ထဲဝင်သွားသော စိုးနိုင်ထွန်းလရည်များနှင့်အတူ ဆောက်ခေါင်းထဲမှ တဘူဘူ တဘွိဘွိနှင့် ပြန်အန်ထွက်လာသည့်လေအံသံတို့ ကို ဂရုမစိုက်ပဲ စိုးနိုင်ထွန်းလီးမှာ ပေပွနေသော ဆောက်ရည်များနှင့်လရည်များကို ထမိန်ဖြင့် တချက်သုတ်ပေးကာ အခန်းထဲမှ ထွက်ဖို့ပြင်လိုက်သည်။ “ဟာ…အန်တီမ ဘယ်လဲ မသွားနဲ့ဦး သား….ထပ်လိုးချင်သေးတယ်….” ‘မနက်မှ လိုးတော့ မင်းအမေတို့အဖေတို့ နိုးလာရင် မလွယ်ဘူး အန်တီမသွားတော့မယ်” ခင်မစိတ်ထဲ အလိုးခံနေတုန်းက ဘာမှအကြောက်အလန့်မရှိပေမဲ့ တူဖြစ်သူ လရည်များ ဆောက်ပတ်ထဲဝင်သွားပြီးချိန်တွင်။
အိမ်သားများ နိုးပြီး သိသွားမှာကို အလိုလို စိုးကြောက်စွာဖြင့် မိမိ အခန်းဆီပြန်လာပြီး တံခါးလော့ချ၍ အိပ်ယာထက်သို့ လှဲ အိပ်ချလိုက်သည်။ “ဟင်…” ပါးပြင်ထက်သို့ ကျရောက်လာသော နွေးထွေးနူးညံ့သည့် အထိအတွေ့ကြောင့် ခင်မ လန့်ကနဲ နိုးလာရသည်။ “အို…” မျက်လုံးဖွင့်ဖွင့်ချင်း မြင်လိုက်ရသည်က တူတော်မောင် စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့လီးထိပ်နီရဲရဲကြီးကို မျက်လုံးရှေ့မှာ မြင်လိုက်ရတော့ ခင်မ ရင်တွေ လှိုက်ဖိုသွားရသည်။ “အစောကြီးပဲ ဘာလာလုပ်တာလဲ” “အန်တီမကို လိုးမလို့” မျက်လုံးဖွင့် မပွင့်တပွင့်မေးလိုက်သည့် ခင်မကို ပြန်ဖြေလိုက်သည့် တူဖြစ်သူရဲ့ အသံကြောင့် ခင်မ ဆောက်ပတ်ထဲက သိမ့်ကနဲဖြစ်ကာ ယားယံလာသည်။ အိပ်ယာမှထဖို့ပြင်လိုက်သည့် ခင်မရင်ဘတ်တို့ကို လက်ဖြင့်တွန်းပြီး အိပ်ယာပေါ်ပြန်လှဲချဖို့ကြိုးစားနေသော စိုးနိုင်ထွန်းကြောင့် ခင်မလန့်သွားသည်။ “ဟဲ့…စောစောစီးစီး ဘာလာလုပ်ချင်နေတာလဲ မင်းအမေနဲ့အဖေသိသွားရင် ခက်ကုန်တော့မှာပဲ”။
“ဖေဖေနဲ့မေမေက မင်္ဂလာဆောင်ဧည့်ခံရှိလို့ အစောကြီးထဲက သွားကြပြီ…လုပ်ပါ အန်တီမရယ်…ဒီမှာ သားလီးကိုလည်း ကြည့်ဦး တအားလိုးချင်နေရှာပြီ” ပြောလည်းပြော ပုဆိုးလှန်ပြလိုက်သည့် စိုးနိုင်ထွန်းကြောင့် ခင်မ မျက်လုံးတွေ တူဖြစ်သူပေါင်ကြားမှ ရှေ့သို့ ငေါထွက်ကာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည့် လီးကြီးကို ကြည့်နေရင်း တံတွေးတစ်ချက် မျိုချလိုက်မိသည်။ လီးထိပ်ဖူးကြီးကမှိုပွင့်ကြီးကားဖြန့်ထားသလို ကြီးမားပြန့်ကားနေပြီး လီးဒစ်အရေပြားတဝိုက်မှာထင်ရှားစွာ တွန့်ကောက်ကွေးနေသည့် သွေးကြောမျှင်နီရဲရဲလေးများနှင့်အတူ လီးတန်ကြီးဘေးပတ်လည်မှာ ထောင်ထနေသည့် အကြောမြောင်းကြီးက ဖောင်းကြွနေလျက် လအုနှစ်လုံးက လေထဲမှာ ရမ်းခါနေတာ မြင်လိုက်ရချိန် ခင်မရင်ထဲက ကာမစိတ်များကို ထိန်းချုပ်ဖို့ မကြိုးစားတော့ပဲ တူဖြစ်သူရှေ့ ဒူးတုပ်ထိုင်လိုက်သည်။ ဆီးစပ်အထက်လီးအရင်းတဝိုက်မှာ ပေါက်နေသော လမွေးရှည်ရှည်များကို လက်ချောင်းကလေးများဖြင့် ပွတ်သပ်ကစားလိုက်ပြီး။
ပါးစပ်ဟကာ စိုးနိုင်ထွန်း လီးထိပ်ဖျားလေးကို ငုံစုပ်လိုက်သည်။ “ပလွတ်….” “ပြွတ်…” “အ…ရှုး….အန်….အန်…တီ…မ” ခြေဖျားလေး မြောက်ကနဲကြွသွားသော တူဖြစ်သူရဲ့ ညည်းညူသံကို ကြားလိုက်ရတော့ ခင်မ မျက်လုံးလေးကို အပေါ်သို့ လှန်ကြည့်လိုက်သည်။ “လီးကော လမွေးတွေကော မွေးကြိုင်နေပါလား ဘာတွေ လိမ်းလာတာလဲ” “အန်တီမ လီးစုပ်ပေးရင် မနံအောင် ရေမွေးတွေ ဆွတ်လာတာ” စေတနာစကားသံတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြောင့် ခင်မစိတ်ထဲကျေနပ်သွားပေမဲ့ “အောင်မယ်…မင်းလီးကို အန်တီမက စုပ်ပေးမယ်လို့ အပိုင်တွက်လာတာပေါ့ ဟုတ်လား သွား မစုပ်တော့ဘူး… ” မူနွဲ့နွဲ့လေး ပြောလိုက်ကာ မတ်တပ်ရပ် ကျောခိုင်းလိုက်သည့် ခင်မရဲ့ကိုယ်လုံးကို နောက်မှ သိုင်းဖက်လျက် လည်ပင်းတို့ကို နမ်းရှိုက်လိုက်သည့် စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့လီးတန်ကြီးက ဖင်ကြားသို့ ထောက်ကာ ပွတ်နေသောကြောင့် ခင်မသွေးသားတွေဆူပွက်လာသည်။
အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်တော့မယ်နော်” ပြောလည်းပြော
အင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်ဖို့ပြင်နေသည့် တူဖြစ်သူ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို တစ်ချက်စောင်းငဲ့ကြည့်ရင်း ခင်မ မျက်စောင်းထိုးလိုက်သည်။ “လူလည်လေး….အကုန်တောင်းနေတာပဲ…ဟွန်း….မင်းလည်းအဝတ်အစားတွေအကုန်ချွတ် ပြီးရင်အန်တီမကို ချွတ်ပေး” စိုးနိုင်ထွန်းမျက်နှာလေး ဝင်းလက်သွားကာ သူ့ရှပ်အင်္ကျီကိုလျင်မြန်စွာချွတ်လိုက်ပြီးတဆက်တည်းမှာပဲ သူ့အဒေါ်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ခင်မကိုယ်လုံးပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေ မရှိတော့….ဘော်လီအောက်မှ ရုန်းကြွလျှံထွက်နေသည့်နို့အုံတင်းတင်းကြီးများကို မြင်လိုက်ရတော့ စိုးနိုင်ထွန်း လက်ချောင်းကလေးတွေက ခင်မနောက်ကျောမှ ဘော်လီချိတ်တို့ကို တုန်ခါနေသောလက်ချောင်းကလေးများဖြင့်လျင်မြန်စွာ ဖြုတ်ပေးနေမိသည်။ ခင်မ ရင်ဘတ်တခုလုံး အေးကနဲဖြစ်သွားကာ နို့အုံနှစ်လုံးစလုံးက အတိုင်းသားပေါ်လာသည်။
စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့လက်တို့က ခင်မရဲ့ ခါးထက်ကပ်နေသော အတွင်းခံဘောင်းဘီဆီသို့ ရောက်သွားကာ အောက်သို့ဆွဲချ ချွတ်ပေးနေရင်း ခင်မ ရင်သားတို့ဆီ မျက်နှာအပ်နမ်းရှိုက်လိုက်သည်။ ခင်မရဲ့မို့မောက်ဖွံ့ထားသော နို့သီးနှစ်လုံးကြားမျက်နှာအပ် နမ်းရှိုက်နေရာမှ စိုးနိုင်ထွန်း လက်တဘက်က ညာဘက်နို့အုံကို ဇိကနဲနေအောင် ဆုပ်ချေလိုက်ပြီး ကျန်နို့တဘက်ဆီသို့ နှုတ်ခမ်းသားတို့ဖြင့် ထိနမ်းနေရာမှ နို့သီးခေါင်းချွန်ချွန်လေးကို ပါးစပ်ထဲ စုပ်ငုံသွင်းလိုက်သည်။ “ပြွတ်….ပြွတ်….အင့်…အားးးးကျွတ်စ်….ကျွတ်စ်….သား…တအားမစို့နဲ့ကွာ…အား…အိုး…” ခင်မ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးသွားအောင် တူဖြစ်သူ အူရိုင်းလေးက နို့တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းစို့ပေးနေသည်။ တလူးလူးတလွန့်လွန့်ဖြင့် ခင်မတစ်ယောက် စိုးနိုင်ထွန်းခေါင်းကို ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း ဆံပင်တို့ကို ဆုပ်ကိုင်ထားလျက် သူမရဲ့ နို့တစ်ဘက်တို့ကို တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင်စို့နေသည့် စိုးနိုင်ထွန်းကို တခြားဘက်သို့ ပြောင်းစို့ရန် ရွှေ့ပေးလိုက်သည်။
ခြေထောက်တို့ကားလျက် မတ်တပ်နို့စို့နေရာမှ စိုးနိုင်ထွန်းက ခင်မကို တွန်းလိုက်တော့ အိပ်ယာထက်သို့ ခင်မက ပက်လက်ကျသွားပြီး အပေါ်မှ စိုးနိုင်ထွန်းက ထပ်လျက် လက်တဘက်က နို့အုံအောက်ခြေမှ ညှစ်ကာ နို့သီးခေါင်းလေးကို တပြွတ်ပြွတ်ဖြင့် စို့ပေးနေသည်။ “ပြွတ်…ပလွတ်…စွိ….ရှလူး….” နို့အုံ အောက်ခြေမှ လျှာဖျားဖြင့် နို့သီးခေါင်းရောက်သည်အထိ ရှလူးကနဲ သိမ်းယက်ကာ နို့သီးခေါင်း မာကျောကျောလေးကို ပါးစပ်ထဲထည့်လျက်သွားဖြင့်မနာ့တနာလေး ကိုက်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ “ပြွတ်…ပလပ်…ရှလွတ်…ရွှတ်…ရှလူး…ပြွတ်…စွိ…စွိ…အွန့်….အို….အမေ့…သား….သားလေး…” နို့စို့နေသည့် စိုးနိုင်ထွန်းလီးတန်ကြီးကလည်း ခင်မဆောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်သို့ ပွတ်တိုက်တွန်းထိုးမိနေတော့ ခင်မ ခါးလေးကော့ ပေါင်တွေဖြဲကာ လီးအဝင်ကောင်းစေရန် အလိုလိုနေရင်း လုပ်ပေးနေမိသည်။ “အန်တီမ….သား လိုးတော့မယ်နော်” ပြောလည်းပြော။
လီးထိပ်ဖူးကြီးကို လက်တဘက်က ကိုင်ကာ ဆောက်ပတ်ဝသို့ တေ့လိုက်ပြီး စိုးနိုင်ထွန်း ဆတ်ကနဲ ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ “ဘွတ်…ပတွတ်…ဖလွတ်” “အာ…မဝင်ဘူး….ချော်သွားပြီ” “အန်တီမသေချာဖြဲပေးထားလေ ” “အင်း…..သေချာတေ့ပြီးမှ လိုး….အင်း…ဟင့်….” စိုးနိုင်ထွန်းတစ်ယောက် လိုးချင်ဇောတွေတအားကြီးပြီး လီးဒစ်ကြီးကို ဆောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းထဲထိုးကလိနေရင်း အားမာန်ပါပါဖြင့် ဆောင့်လိုးချလိုက်သည်။ “ဘွတ်…” ဆောက်ပတ်ထဲ အရှိန်ပြင်းစွာ တိုးဝင်လာသော တူဖြစ်သူရဲ့ သံချောင်းကြီးအလားတင်းထောင်နေသော လီးဒဏ်ကြောင့် ခင်မခါးလေးကော့တက်သွားသည်။ “အ…အ…ဝင်…ဝင်သွားပြီ…” မပီမသရေရွတ်သံနှင့်အတူ ခင်မခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မြှောက်ကားပေးလိုက်သည်။ စိုးနိုင်ထွန်းမှာလည်း ပူနွေးနူးညံ့အိစက်နေသည့် ဆောက်ပတ်အတွင်းသားများက သူ့လီးကို ဆွဲညှစ်နေမှု့ကြောင့် ဆောက်ပတ်ထဲဝင်နေသောလီးကို ဖြည်းညင်းစွာ ပြန်ဆွဲထုတ်နေသည်။
လီးဒစ်မြုပ်ရုံလောက်ထိ ဆွဲထုတ်ပြီးချိန်တွင်တော့ ခင်မရဲ့ ပါးပြင်လေးကို ကုန်းနမ်းလိုက်ပြီး လီးကို ရှေ့သို့ဆောင့်သွင်းချလိုက်ပြန်သည်။ “ဗွတ်….ဗလွတ်…ဗြွတ်….” “ဖွတ်…ပြွတ်….ဇွိ….ဖောက်….အိုးးးးးးကျွတ်စ်ကျွတ်စ်….သားရယ်…လီးတဆုံးထည့်ပြီးရင် ပြန်ထုတ်ပြီးလိုးပေးလေ….” “သားလိုးတာ နာလို့လား….” “အင့်….လီးအရင်းနဲ့ဆောက်ပတ်ကပ်သွာရင် ဖိမကျိတ်နဲ့….” “အင်းပါ….ဒီလိုလေး လိုးမယ်” စိုးနိုင်ထွန်း လီးကို တဆုံးထုတ်လိုက်ပြီး ခင်မဆောက်ပတ်ထဲ အရှိန်ဖြင့် ပြန်ဆောင့်ချလိုက်သည်။ “အင့်….အား….အွန်….ဘွတ်…ဗျစ်….ဒုတ်….ဖောက်….အမလေး….သား….လိုးတာ ကောင်းလိုက်တာကွာ…” စိုးနိုင်ထွန်းရဲ့ရင်ဘတ်ကလေးကိုလက်ချောင်းတို့ဖြင့်ပွတ်ပေးနေရင်း ပြောလာသည့် ခင်မကြောင့် စိုးနိုင်ထွန်း လီးကြီးက ပိုပြီးတင်းကနဲဖြစ်သွားကာ ခင်မ နို့တဘက်ကို လက်ဖြင့်ကိုင်ညှစ်၍ သူ့လီးအဝင်အထွက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်စေရန် လိုးနေသည့် အရှိန်ကို မြှင့်လိုက်သည်။
အင်းးးးဟင်းးးးးဟင်းးးးးသားရယ်….ဘယ်လိုတွေ လိုးနေတာလဲကွယ်…. “လီးနဲ့လိုးတာပဲလေ….ကောင်းလား အန်တီမ….သားလီးကြီးက မိုက်ရဲ့လား….” “မိုက်တာထက်ကို ပိုမိုက်တယ်….သားလီးကြီးက ပြောင်းဖူးကြီးကျနေတာပဲ….ဆောက်ပတ်ထဲ ပြည့်ကျပ်နေတာပဲကွာ…” စကားပြောရင်း လိုးနေရာမှ ခင်မက တစ်ချက်တစ်ချက် ဆောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးကို တင်းကနဲနေအောင် ညှစ်ပေးလိုက်ချိန် စိုးနိုင်ထွန်း လီးကြောတွေ ရှိန်းဖိန်းသွားကာ သုတ်ရည်များပန်းထွက်သွားချင်လောက်အောင် အကောင်းကြီးကောင်းသွားသည်။ သူ့ခါးကို လက်ဖြင့်ကိုင်ဆွဲပေးကာ အောက်မှနေ အရှိန်တက်လာသော ခင်မတစ်ယောက် မျက်နှာလေးရှုံ့လိုက်မဲ့လိုက် ခံနေရာမှ ပါးစပ်မှလည်း “အား….ပြင်းပြင်းဆောင့်..အင့်..ဆောင့်..အာ့..နာနာဆောင့်..အား…အသေဆောင့်ကွာ…အင့်..အား…” “သားလိုးတာ ကောင်းရဲ့လား….” လီးကို နှဲ့သွင်းလေးသွင်းလိုက်ကာ စောက်ပတ်ထဲ မွှေလိုးပေးလိုက်တော့…။
“အ…ကောင်းတယ်…နာနာဖိဆောင့်..မြန်မြန်လေး..အာ့..အင့်..အင့်…” စိုးနိုင်ထွန်းဖင်ကြီးကြွကာကြွကာဖြင့် ခင်မဆောက်ဖုတ်ကို တဖုန်းဖုန်းမြည်အောင်လိုးပေးနေရာမှ “အန်တီမ….သား….အသေလိုးတော့မယ်…ကျိတ်ခံနော်” “လိုးပါ…အသေလိုး..အအား..ရတယ်..ဆောင့်..ဘာမှမဖြစ် ဘူး..အင့်…” ခင်မ ဖင်သားကြီးတွေ ကြွလိုက် နိမ့်လိုက်ဖြင့် အိပ်ယာထက်မှာ ကော့နေအောင် အလိုးခံနေမိသည်။ တူအရင်းခေါက်ခေါက်ရဲ့ လီးညိုရှည်ကြီး မိမိဆောက်ဖုတ်ထဲမှနေ သားအိမ်ဝထိ တဒုတ်ဒုတ် တဖုတ်ဖုတ် မြည်အောင် လိုးပေးနေမှု့ကို ကြည်နူးစွာခံစားလျက် ပါးစပ်ကလည်း တတွတ်တွတ်ဖြင့် ပြောပေးနေကာ အားရှိပါးရှိ အလိုးခံနေမိသည်။ “ဆောင့်..ဆောင့်..ဘွတ်…ဖူး..ဘလွတ်.. ဖူး…ဖုန်း…ဗွီ…ဗွတ်…ဘလပ်…တပ်…ဗွိ…..ဗွတ်.ဖူး…ကောင်းတယ်…ဆောင့်စမ်းပါသားရယ်…စောက်ပတ်ကြီးပြဲထွက်သွားအောင် ဆောင့်လိုးလိုက်ရတယ်။
အားပါးပါးးးး…အားးးးနာနာဆောင့်ပါ ပြီးတော့မယ်…ပြီးတော့မယ်….အန်တီမ ဆောက်ပတ်ထဲက ဆောက်ရည်တွေ ထ့က်တော့မယ်…” “သားလည်း ပြီးတော့မယ် အန်တီမ….အား….ဟားးးး” နှစ်ယောက်သားတဏှာဇောဖြင့်မီးကုန်ရမ်းကုန်ဖွင့်ပြောချကာ လိုးနေခံနေသံတို့က ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်တော့ပဲ လိုးနေကြမှန်းသိသာစေလောက်အောင်အခန်းငယ်လေးထဲစိတ်ထင်တိုင်းကျဲနေကြသည်။ စိုးနိုင်ထွန်းကအပေါ်စီးကနေ လီးကြီးဝင်ထွက်ကောင်းရန် ခါးကိုနှိမ့်ကာကြွကာ ဖိဆောင့်ပေး နေသလို ခင်မကလည်း အောက်ကနေ သူမဖင်သားအိအိကြီးနှစ်ဖက်ကို စိတ်လိုလက်ရပင် ကော့ကာကြွကာနှင့် စည်းချက်ညီညီ ခံပေးနေသည်။ လီးနှင့်စောက်ပတ် တဖွတ်ဖွတ်တဘတ်ဘတ်ထိတွေ့သံတို့က မြိုင်ဆိုင်လာပြီး နှစ်ယောက်သား တက်ညီလက်ညီလည်း ရှိလှသဖြင့် ဖီလင်တွေပိုတွေ့လာကြသည်။ “ကောင်းလိုက်တာ အန်တီမရာ ” အတူတူပါပဲ သားရယ်…..လိုး…မြန်မြန်လေး…အန်တီမ ပြီးတော့မှာ….။
စောက်ရည်တွေ ထွက်တာ ရွှဲအိုင်နေပြီ မြန်မြန်လေးလိုး…အတူတူ တပြိုင်တည်း ပြီးရအောင်ကွာ လင်တစ်ယောက်ကို ပြောနေသလို ညုပြောလေး ပြောလိုက်သည့် အဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့လေသံကြောင့် စိုးနိုင်ထွန်း ခင်မပေါင်တွေကို မိုးပေါ်ထောင်အနေအထားပြောင်းလိုက်ပြီး လီးကို သေချာကိုင်ကာ ဆောက်ပတ်အဆုံးထိ ဝင်အောင် ဆောင့်သွင်းလိုက်ပြန်သည်။ ခင်မပေါင်တန်နှစ်ဖက် မြှောက်ထောင်ထမ်းကာ အပေါ်စီးကနေ ပေါင်ခွကြားထဲကို သဲကြီးမဲကြီး ဖိလိုးပြစ်လိုက်သောစိုးနိုင်ထွန်းရဲ့လီးကြီးက စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး နေရာလပ်မရှိစေရအောင် မွှေနှောက်ဖိလိုးနေမှု့ကြောင့် ခင်မတကိုယ်လုံး ကော့ပျံလန်နေအောင် လှုပ်ရှားယိမ်းထိုးနေသည်။ “အင့်ပြွတ်..စွတ်..ဖောင်း..စွတ်စွတ်စွတ်.ဖောင်း..ပြွတ်ပြွတ် ဖောင်း…အင့်…အာ့..ဆောင့် ..စွတ်စွတ် ပြွတ်..ဖောင်း..အင့်..ကောင်းတာ…အင့်.. ကောင်းလိုက်တာ…ဆောင့်..စွတ်…ပြွတ်..ဖောင်း..ဖောင်း.. ဖောင်း…” “လရည်တွေထွက်တော့မယ်…အန်တီမ…”။
“အင်း…အန်တီမစောက်ပတ်ထဲပြီးပေး…ပြွတ်ပြွတ်…ပြွတ်ပြွတ်…ဖောင်း ဖောင်းဖောင်း..ဖောင်း..အင့်..အိ..အင့်…” စိုးနိုင်ထွန်း မေးကြောကြီးများထောင်ထလာအောင် အံတင်းတင်းကျိတ်လိုက်ပြီး တလစပ် လိုးထည့်လိုက်သည်။ စောက်ပတ်ထဲရှိ လီးတခုလုံး စောက်ရည်များဖြင့် စိုရွှဲနေပြီး လိုးလိုက်တိုင်း တဘွိဘွိ တဘွတ်ဘွတ် တဖွတ်ဖွတ် အသံတွေထွက်ကာ လီးတချောင်းလုံးရှိ အကြောတို့ ဖောင်းကြွတင်းမာလာပြီး တကိုယ်လုံးရှိအကြောတို့ ဖျိုးဖျိုးဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်သွားရလောက်အောင် ကောင်းလာလျက် စိုးနိုင်ထွန်း မျက်လုံးတို့ မှိတ် အတင်းကုန်းကြုံးလိုးနေရင်းးးးး “အားးးးးအန်တီမ….ပြီး….ပြီးပြီ….ပြီးပြီ…..အား….” “ဗျစ်….ပတစ်….ပတစ်…ဗျစ်….” “ဟင်းးးးးးအင်းးးးးရှုးးးးးးကောင်းလိုက်တာ အန်တီမရာ….” ပျစ်ချွဲနေသော သုက်ရည်ပူနွေးနွေးကြီးများ သူမစောက်ခေါင်းထဲ ဗြစ်ကနဲဗြစ်ကနဲ အပြည့်အသိပ်တိုးဝင်လာမှုကို ခံစားသိလိုက်ရချိန် ခင်မစောက်ပတ်ထဲမှ သုတ်ရည်များကလည်း ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲဖြင့်။
စိုးနိုင်ထွန်းလီးတန်ကြီးပေါ် ပန်းချလိုက်သည်။ အဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့ဆောက်ရည်များက ဆောက်ခေါင်းထဲမှ ပွက်ကနဲပွက်ကနဲ ထွက်ကျလာပြီး သူ့လီးတချောင်းလုံး နွေးကနဲ ဖြစ်ကာ စိုရွှဲသွားသည့် အရသာကို ခံစားလိုက်ရသည့် စိုးနိုင်ထွန်းမှာလည်း ကျေနပ်စွာဖြင့် သူ့လီးထဲမှ လက်ကျန် သုတ်ရည်များကို ခင်မစောက်ပတ်ထဲ ဇိကနဲဇိကနဲမြည်အောင် ပန်းထုတ်ထည့်ပေးလိုက်တော့သည်။ “အ အ အီး ဟီး အား ကောင်း ကောင်းလိုက်တာ သားရယ် လီးကိုဆွဲ မချွတ်နဲ့ဦးနော် ကပ်ထား တအားဖိပြီးကပ်ညှောင့်ပေး သိလား အ အ အိအိ ကောင်းတယ် အို့ အို ကောင်း လိုက်တာကွယ်” “ဘုန်းးးးး” ခင်မ ဖင်နဲ့အိပ်ယာထိသွားသံ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာပြီး…. “ကောင်းလိုက်ထာသားရယ်… လီးရည်တွေကလည်းများလိုက်တာ….အားးးးရှီး..ကျွတ်ကျွတ်…” သားလည်း ကောင်းတယ်…အန်တီမရာ…ညကထက် ပိုကောင်းတယ်သိလား….နေ့တိုင်းလိုးမယ်နော်။
အန်တီမ ဆောက်ပတ်ကြီးကို သားတော့ ကြိုက်သွားပြီ သိလား…. “ဖယ်ပါဦး…တကထဲ လူကို လိုးလိုက်တာများ သူ့မယားကျနေတာပဲ….။ လူပျိုလေးတဲ့ လိုးလိုက်တာများ….စက်သေနတ်နဲ့ပြစ်နေသလိုပဲ…ဟွန်းးးး” အမူပိုပိုဖြင့်ပြောလာသည့် အဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်စိုးနိုင်ထွန်းမျက်နှာလေးက မချိုမချဉ်ဖြစ်သွားကာ “အန်တီမဆောက်ဖုတ်ကြီးက အီစိမ့်နေအောင်လိုးလို့ကောင်းတာကိုး….ညတိုင်းလိုးမယ်နော်…” “ညတိုင်းလိုးလို့မရပါဘူး….သားက ကျောင်းနေတုန်းလေ ဒီနှစ်ဆယ်တန်းသာ အောင်အောင်ကြိုးစားနော်….အန်တီမကြောင့် သားစာမေးပွဲကျသွားတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး…” “စိတ်ချပါ….သားက စာလိုက်နိုင်ပါတယ်…အန်တီမကို မလိုးရရင်သာ စိတ်ညစ်ပြီး စာမေးပွဲမဖြေနိုင်မှာ….ညတိုင်းပေးလိုးနော်…သားလေအန်တီမဆောက်ဖုတ်ကြီးကို ကြိုက်သွားပြီသိလား…” “အေးပါ…မင်းအမေနဲ့အဖေတို့မရိပ်မိအောင် အနေအထိုင်တော့ ဆင်ခြင်နော်….”။
“စိတ်ချပါ….ဟော…ဒီမှာ သားလီးကြီးပြန်တောင်လာပြီ အန်တီမ ထပ်လိုးကြရအောင်နော်” “ဟယ်….ကျောင်းသွားရမှာလေ….သွား အဝတ်အစားလဲပြီး ကျောင်းသွားတော့” “ဒီနေ့ ကျောင်းပိတ်တယ် အန်တီမရဲ့ ကျူရှင်ကလည်း ညနေမှသွားရမှာ မေမေနဲဖေဖေလည်း မရှိကြဘူး အေးအေးဆေးဆေး လိုးကြမယ်နော်…အန်တီမ…ဒီမှာ ကြည့်ဦး….လီးကြီးက တအားကို တင်းလာပြန်ပြီ….” “ဟယ်….” ဆောက်ဖုတ်ထဲမှ တူဖြစ်သူလီး တစစဖြင့် တောင်ထလာတာကို ခံစားသိရှိလိုက်ရတဲ့ ခင်မ နောက်တစ်ချီအလိုးခံဖို့ အရေး ကြိုတွေးလို့ သဘောတကျဖြစ်စွာဖြင့် စိုးနိုင်ထွန်း ပါးလေးကို ရွှတ်ကနဲ မြည်အောင် နမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် အခန်းငယ်လေးထဲမှာ အဝတ်အစားဗလာဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံလိုးပွဲကြီး အားပါးတရ ခင်းကျင်းနေလျက် တူအရင်းခေါက်ခေါက်လေးရဲ့ လရည်တို့ကို သားအိမ်ထဲသို့ အကြိမ်ကြိမ်